Ngaba abatyali mali bayashiya kwiStock Market? | Ezezimali
Ngaba abatyali mali bayashiya kwiStock Market?
Uloyiko lokuba kungakho ukuwa kwiimarike zamasheya zamanye amazwe kubangela ukuba inxenye entle yabatyali zimali abancinci nabaphakathi bathathe amanyathelo okhuseleko ukuvula izikhundla kwi Iimarike zezabelo. Kodwa kungakanani ukuhanjiswa ukusuka kwimodeli yotyalo-mali ukuya kwenye? Ngale ndlela, idatha ayicacisi imeko entsha ebonisiweyo ngoku. Nangona kukho eminye imiqondiso malunga nokuba iinjongo zabantu abafuna ukwenza uninzi lweeasethi zabo zobuqu okanye zosapho zinokuya phi.
Kule meko ngokubanzi, imarike yemasheya yaseSpain ithengise ngee-equities ezingama-40.955, 11,1 yezigidi zeerandi kwinyanga ephelileyo yonyaka ophelileyo, emele i-3,7% engaphantsi kwenyanga enye yonyaka ophelileyo. Kwelinye icala, inani lothethathethwano ngo-Novemba yayizizigidi ezi-13, oko kukuthi, i-2017% isezantsi kunoDisemba XNUMX. Ezi datha sele zinika umqondiso wokuba ziphi iindawo zokudubula kwimarike yezemali. Nangona ukuthoba kancinci Kwizikhundla abatyali zimali abathengisayo, abathi ke bona bajonge ezinye iiasethi zemali, kwezinye iimeko nakwezinye iimodeli.
Kwelinye icala, imarike yezemali evela kwimarike inyuse urhwebo kwikamva kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe, i Ibex 35, kwisixa esiqokelelweyo sonyaka esiyi-2%. Ngelixa ngokuchaseneyo, iikhontrakthi zexa elizayo kwisahlulo sesitokhwe inyuse urhwebo ngama-77,8% kunye nezivumelwano zexesha elizayo kwisalathiso sezahlulo semarike yestokhwe saseSpain ngama-58,9%. Kwixa elizayo lesitokhwe kulo Novemba, urhwebo lonyuke nge-146,5% xa kuthelekiswa kwinyanga enye yonyaka ophelileyo. Indawo evulekileyo inyuka ngokubhekisele kwinyanga ephelileyo kwikamva kwizabelo nakukhetho kwizabelo nge-4,4% kunye ne-6,6%, ngokwahlukeneyo, nakwiinketho kwi-Ibex 35 nge-6.1%.
1 Abatyalomali kwizikhundla zemivuzo ezinzileyo
2 Iziphumo zeBME zithiwe thaca
3 Umgca oqinileyo weshishini
4 Ukuphambukiswa kwezinye iimveliso zezemali
5 Ukubuyela kwimali yokuhlawula amatyala
6 Amathuba oshishino
Abatyalomali kwizikhundla zemivuzo ezinzileyo
Ngokumalunga nengeniso esisigxina, umthamo othengiswayo ngoDisemba ukhule ngama-36,2% xa kuthelekiswa nelo xesha linye kunyaka ophelileyo, ngenxa yokuthengwa kwempahla ityala likazwelonke nelangaphandle. Ukonyuka okuhambelana neenyanga ezilishumi elinesibini zokuqala konyaka bekuyi-45,5%. Kwelinye icala, inani lemicimbi emitsha ebandakanyiweyo yorhwebo kwi-MARF yafikelela kwi-520 yezigidi zeerandi, nto leyo ebonisa ukwanda kwe-61,5% xa kuthelekiswa kwinyanga enye yonyaka ophelileyo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba umthamo ohlanganisiweyo ekupheleni kweenyanga ezilishumi elinambini zonyaka wawuyi-5.688 yezigidi zeerandi, nto leyo ebonisa ukwanda kwe-51,1%. Oku kuthetha ukuba umthamo osasazekileyo osasazwayo kule marike yemali ufikelele kwi-3.411 yezigidi zeerandi. Inani elimele ukunyuka okuqikelelweyo okungabikho ngaphantsi kwaye kungabikho ngaphezulu kwe-36,6%. Ekukhuleni okutsale ingqalelo enkulu kwinxalenye elungileyo yeearhente zezimali zeli kwaye ekwathatha ukubaluleka okukhethekileyo kwinto enokuba isigqibo sabatyalomali abancinci nabaphakathi ukususela ngoku ukuya phambili.
Iziphumo zeBME zithiwe thaca
Kwelinye icala, inkampani edweliswe kwimarike yaseSpain enxibelelene ngqo nemisebenzi yabatyali zimali yiBME. Ewe, le nkampani iye yazisa emarikeni isicwangciso sayo sobuchule kule minyaka mithathu izayo kusuku lokuqala lwabatyali-mali ngeenjongo zokwahlula ingeniso, ukukhawulezisa ukukhula kunye nokugcina Inzuzo yezabelo. Kwaye kunjalo ishiye idatha ethile enokuthi ibaluleke kakhulu kwizigqibo zabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ngale ndlela, inqanaba elitsha lokukhula lixhaswe yimodeli yolawulo olomeleleyo, ukonyuka kwiindawo zalo zeshishini kunye nokukhula okungaqhelekanga sesinye sezigqibo eziphambili esishiye kule ntlanganiso namajelo eendaba. Njengoko iintsika zesicwangciso esitsha zizinto ezahlukeneyo kwaye kugxilwe kubathengi. Kwelinye icala, isungule ukuba iyakuphinda ukuzibophelela kwayo ekunikezeleni ngenzuzo ephezulu kunye nomgaqo-nkqubo ozinzileyo wezabelo kubanini zabelo.
Umgca oqinileyo weshishini
Enye yamandla enkcazo yayo yile ibonisa ukuba inqwenela ukubonelela ngeziseko zophuhliso kwiimarike zaseSpain zamaziko emali kulo lonke ikhonkco lexabiso. Ukuya kuthi ga apho uJavier Hernani, umphathi we-BME, eqaqambisile kwintetho yakhe amandla enkampani ekufuneka ajongane nesicwangciso sobuchule, esiya kuba liphepha elitsha indlela yenkampani ngexesha lemithambo emithathu elandelayo.
Kwinqaku elahlukileyo, ummeli we-BME ugxininise ukuba yi imodeli yoshishino eqinileyo kwaye inenzuzo, ubudlelwane obusondeleyo kunye nobude obugcinayo kunye nabaxumi bayo, ukusebenza kwayo kwezobuchwepheshe, italente yamaqela omsebenzi wayo kunye namandla kunye nokwamkelwa kwegama layo. "I-BME ifuna ukuba ngumboneleli weziseko zophuhliso kwiimarike zaseSpain zamaziko emali kulo lonke eli xabiso." Ukwenza oku, kuya kukhulisa umsebenzi weendawo zayo zeshishini kunye nokufunda ngamathuba okukhula okungaqhelekanga okuvumela ukuba ihlukane kwaye inikezele ngeyona nkonzo intle kubathengi bayo.
Ukuphambukiswa kwezinye iimveliso zezemali
Kuyo nayiphi na imeko, kuyinyani ukuba inxenye yabatyali zimali abancinci nabaphakathi bagqibe kwelokuba babuyele kwingeniso esisigxina emva kwento entsha ethe yabakho kwimarike ezahlukeneyo zezemali ngalo mzuzu. Kwaye awunakulibala malunga ukunyuka kwinqanaba lenzala yeebhanki zexesha elimiselweyo. Kungenxa yokuba, inxenye elungileyo yemali eyinkunzi yotyalo-mali ijikiswa kwezona dipozithi zinenzuzo zithengiswa ziibhanki.
Ngenxa yesi sicwangciso seshishini, inzuzo inokufezekiswa edla ngokutshintsha phakathi kwe-1% kunye ne-2% ngentlawulo emiselweyo neqinisekisiweyo minyaka le. Nangona kungalunganga ukuba imali kuya kufuneka ikhubazeke ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi. Kodwa ngale ndlela, iziphithiphithi ezikhoyo kwiimarike zezemali ziyathintelwa kwaye oko kungavela kulo nyaka unzima esiwuqalileyo. Yenye into eyenzelwe abatyali mali abancinci nabaphakathi kunye neprofayili yokuzikhusela ngakumbi ukwenza imisebenzi yabo yotyalo mali.
Ukubuyela kwimali yokuhlawula amatyala
Esinye isiphumo soku ukungazinzi kwiimarike zezemali Ithathwe kukungabikho komtsalane kutyalo-mali. Ayisiyiyo kuphela kwimveliso yezabelo, kodwa kunye nengeniso esisigxina inikezela ngembuyekezo embi kakhulu, ngakumbi nangakumbi. Asinakulibala ukuba i-2018 ibone eyona minyaka inzima kakhulu yotyalo-mali kwaye ibangele ukuba inxenye entle yabatyali mali ishiye imali yotyalo-mali ngokusebenzisa intlawulelo yabo ehambelana nayo.
Eyona njongo iphambili yezi zenzo ayikokuphinda uye phambili kwi Iilahleko ezinkulu Ezivelisiweyo kwezi nyanga. Ngethuba lokuqala kwiminyaka emininzi, njengoko imibutho yabatyali mali nganye igunyazisiwe ukuba ichaze. Apho okufunwa ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselweyo kukuhlawula amatyala kwiiakhawunti zangoku. Ukusuka kule meko ngokubanzi, akunakuthethwa ukuba eli lixesha elifanelekileyo lokwenza ukonga kunenzuzo. Hayi kangako kwaye ngokuhambelana neendlela ezibeka uninzi lweemarike zezemali.
Kuyo nayiphi na imeko, kufuneka kukhunjulwe ngawo onke amaxesha ukuba nakwezona meko zimbi, kuyakuhlala kukho amathuba okwenyani okwenza ushishino kwicandelo lotyalo-mali. Elona candelo linzima ekusebenziseni esi sicwangciso-qhinga lisekwe ekufumaneni ezi ndawo zentengiso kuba le nkqubo inzima kakhulu ngalo mzuzu kanye nakwimeko yezoqoqosho esikuyo ngoku. Apho kuphela abatyali mali abanamava ngakumbi Bakwimeko yokufikelela kwiiasethi zemali ezinokukhula okukhulayo. Ngokwesiqhelo ukusuka kwezinye iimarike, ezinje ngezinto ezingavuthi okanye isinyithi esinexabiso.
Ngayiphi na imeko, kuhlala kwamkelekile kakhulu ukuba nemali kwiakhawunti yangoku inikwe amathuba anokuvela kwiimarike zezemali. Ayothusi into yokuba babonakale ngexesha apho ungalindelanga kangako kwaye kule meko akuyi kubakho khetho ngaphandle kokufumana iimali ezoneleyo kwiakhawunti yokonga imali ebhankini. Njengabanye babahlalutyi abadumileyo bezezimali kwimarike yemali becebisile.
Ngokwendlela yokuqukumbela, inye kuphela into eqinisekileyo kwaye ayikho enye into ngaphandle komnye unyaka kuya kuba nzima kakhulu ukwenza ukonga kube yinzuzo njengoko ufuna kwasekuqaleni. Kodwa ngokuchaseneyo kuya kufuneka ujonge yonke into eyenzekayo ukusukela ngoku. Zombini ngokubhekisele kwii-equities kunye nengeniso esisigxina kunye nakwiimodeli ezizezinye. Elona candelo linzima lokusebenzisa esi sicwangciso-qhinga sisekwe ekufumaneni ezi ndawo zentengiso kuba le nkqubo inzima kakhulu ngalo mzuzu kanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ngaba abatyali mali bayashiya kwiStock Market?
Isichazi-magama esincinci sokutyala imali kwimarike yemasheya
Gcina imali ngeyona ntelekelelo ininzi kwimalike yemasheya